Seoul waxa ay bilawday in ay xidhato waji-xidho maadaama uu cudurku sii kordhayo
Seoul waxa ay bilawday in ay xidhato waji-xidho maadaama uu cudurku sii kordhayo
Seoul, caasimadda Kuuriyada Koonfureed, ayaa dadka ku qasabtay inay xidhaan maaskaro tan iyo 24-kii si loo xakameeyo faafitaanka degdegga ah ee coronavirus-ka cusub ee Seoul iyo nawaaxigeeda.
Marka loo eego "amarka maaskaro" ee ay soo saartay dawladda hoose ee Seoul, dhammaan muwaadiniinta waa inay xidhaan maaskaro gudaha gudaha iyo meelaha bannaanka ah ee dadku ku badan yahay waxaana la saari karaa oo keliya marka ay wax cunayaan, Yonhap ayaa werisay.
Horaantii bishii Maajo, koox cudurro ah ayaa ka dhacay isbitaalka Litai, oo ah magaalo ay ku badan yihiin meelaha lagu caweeyo, taasoo ku kaliftay dowladda inay uga baahan tahay dadka inay xirtaan maaskaro basaska, tagaasida iyo tareenada dhulka hoostiisa mara laga bilaabo bartamihii May.
Ku-simaha duqa magaalada Seoul, Xu Zhengxie, ayaa shir jaraa'id ku sheegay 23-kii in uu rajaynayo in uu xasuusiyo dhammaan dadka deegaanka in "xiritaan maaskaro ay aasaas u tahay ilaalinta badbaadada nolol maalmeedka".Waddada Waqooyiga Chung Ching iyo gobolka Gyeonggi ee u dhow Seoul ayaa sidoo kale soo saaray amaro maamul oo lagu qasbayo dadka deegaanka inay xirtaan maaskaro.
Tirada kiisaska cusub ee laga helay goobabada caasimadda Kuuriyada Koonfureed ayaa kor u kacday dhawaan sababtoo ah caabuq kooxeed oo ka dhacay kaniisad ku taal Seoul.In ka badan 1000 kiis oo cusub oo la xaqiijiyay ayaa laga soo sheegay Seoul laga soo bilaabo Janaayo 15 ilaa 22, halka ay jireen ilaa 1800 xaaladood oo la xaqiijiyay gudaha Seoul tan iyo markii Kuuriyada Koonfureed ay soo warisay kiiskeedii ugu horreeyay Janaayo 20 ilaa 14 bishaan, sida lagu sheegay xogta dowladda.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in 397 kiis oo cusub oo la xaqiijiyay laga soo sheegay Kuuriyada Koonfureed 23-kii, kiisaska cusubna waxay ku hareen saddex lambar 10 maalmood oo isku xigta.
Waqtiga boostada: Agoosto-27-2020